Mpikamban’ny kaongresy amerikàna mahamay noho ny fiampangàna amin’ny resaka kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny tatitra fa mety nanaiky fanomezana izy ho takalon'ny fitaomany
Voadika ny 27 Janoary 2022 15:34 GMT
“20200310-OSEC-LSC-0235” avy amin'ny USDAgov, nampiasàna ny lisansa CC PDM 1.0
Ny 19 Janoary, fisavàna iray nataon'ny FBI tany an-tranony tao Texas sy ny biraon'ny fampielezankevitr'i Henry Cuellar, mpikambana ao amin'ny kaongresy amerikàna, no hetsika farany indrindra tamin'ny fanadihadiana resaka kolikoly anenjehana ilay mpikamban'ny kaongresy, izay mifototra amina fifandraisana tsy mazava lazaina fa misy amin'i Cuellar, safiotra tiorka-amerikàna, mpanao afera, sy ny orinasam-panjakana azerbaijaney mpamokatra solika. Na nandà aza ny FBI tsy hanome antsipirihany amin'ny fanadihadiana, ny andiana fampiantsoana navoakan'ny “grand jury” federaly, andro roa taorian'ilay bemidina dia manondro fa misy ifandraisany amin'ireo dian'i Cuellar tany Azerbaidjàna tamin'ny 2013 sy ny fifandraisany tany aloha amin'ireo fikambanana azerbaidjaney marobe ilay fanadihadiana, indrindra fa ny orinasam-panjakana mpamokatra solika sy ny Akademia Diplaomatika ao Azerbaijàna.
Tamin'ny 2013 no nanomboka io, niaraka tamin'ilay fitsidihana nataona mpikambana 10 sy mpiasa 32 avy ao amin'ny kaongresy, izay niantohana daholo ny fandaniana natao tany Azerbaijàna mba hanatrika ilay “fifanarahana Amerikàna – Azerbaijan: Vinan'ny Hoavy”. Araka ny nitaterana azy taty aoriana, ilay safiotra tiorka-amerikàna mpanao afera, Kemal Öksüz, izay tamin'izany fotoana izany dia nitantana fikambanana roa— ny “Turquoise Council of Americans and Eurasians” sy ny Fikambanan'ireo Sakaizan'i Azerbaidjàna — no namatsy vola ilay fitsidihana. Na ohatra aza tsy nanatrika ilay fihaonana ity mpikambana ao amin'ny kaongresy, Henry Cuellar avy ao Texas ity, nanatrika izany kosa ny iray tamin'ireo mpiaramiasa aminy.
Volana vitsy tany aloha, Cuellar sy ny vadiny dia nandeha nivahiny tany Azerbaijàna sy Tiorkia tamin'ny alàlan'ny fivahinianana nomanina ary novatsian'ny “Turquoise Council of Americans and Eurasians” vola. Nandritra izany dia izany, nihaonan'i Cuellar koa ireo solontenan'ny orinasam-panjakana mpamokatra solika ao Azerbaijàna (SOCAR) ary niara-nisakafo tamin'ireo mpitantana ilay orinasa izy.
Ny fifamatoran'i Cuellar amin'i Azerbaijàna dia tsy voafetra fotsiny ho tamin'izay fitsidihana indray mandeha izay. Ilay mpikambana ao amin'ny kaongresy ihany koa dia efa nitàna toerana maha-filoha mpiara-mitantana ny Congressional Azerbaijan Caucus taona vitsy lasa izay. Tamin'io toerany io, voalaza fa i Cuellar dia nihaona tamin'ireo manampahefana Azerbaijaney, isan'ireny i Elin Suleymanov, masoivohon'i Azerbaijàna fahiny tao Washington izay ankehitriny mitàna ny toerana Masoivoho any amin'ny Fanjakana Mitambatra. Hatramin'ilay fitsidihana tamin'ny 2013, mazàna i Cueller no nandoka ilay firenena rehefa misy fihaonan'ny Kaongresy, isan'izany ny fandraisana am-panajàna ny SOCAR. Betsaka ireo hetsika hafa nahitàna hatramina fikarohana sy fampianarana momba ny solika sy ny entona nambaran‘ny biraon'i Cuellar tamin'ny 2015.
Taona roa no lanin'ny Biraon'ny Kaomitin'ny Etika ao amin'ny Kaongresy nanadihadiana ilay fivahinianana tamin'ny 2013. Ny tatitra farany dia namintina hoe “ny TCAE (Turquiose Council of Americans and Eurasians) sy ny AFAZ (Assembly of the Friends of Azerbaijan), izay samy teo ambany fitantanan'i Kemal Öksüz daholo, ary niantehitra tamin'ny fanampiana ara-bola sy fanohanana ara-pitaovana avy amin'ny SOCAR, dia niasa ho toy ny mpikarakara sy mpanohana ny fandraisana anjaran'ny Kaongresy tamin'ilay fivahinianana tany Azerbaijàna.”
Taty aoriana i Öksüz dia nampangain'ny “grand jury” ho nandainga tamin'ireo fiampangàna dimy sosona samihafa, isan'izany ny fanafenana “ny tena toetra sy fidadasik'ilay famatsiambola nomen'ny SOCAR ho an'ilay fivahinianana sy Fifanarahana; ny fanaovana fanambaràna diso tany amin'ny Kaomitin'ny Etika momba ny taratasy mahakasika ny mpanohana ilay fitsangantsanganana sy taorian'ilay dia.” Ny Aprily 2018 ilay mpanao afera no voampanga. Iny taona iny ihany koa i Oksuz no nosamborina tany Armenia.
Tany Tiorkia, ny anaran'i Öksüz dia nifamatotra tamin'ny Gülenist Terror Group (FETÖ) izay nokianin‘ny antoko Rariny sy Fampandrosoana (AKP) ho atidoha nikotrika ilay fanonganana fanjakana tsy tanteraka tamin'ny 2016.
Taorian'ny nisamborana an'i Öksüz, araka ny fanadihadian'ny The Intercept vao haingana indrindra tamin'ny 2020, notohizan'i Cuellar ny fampiroboroboana / fampahafantarana ny tombontsoan'i Azerbaijàna. “Taorian'ilay Ady nifanaovan'i Armenia-Azerbaijàna tamin'ny 2020, niadiana ny faritra Nagorno-Karabakh, Cuellar dia nangataka tamin'ireo namany tao amin'ny Kaongresy mba hahazoany antoka fa izay rehetra fanampiana noho ny maha-olona alefa ho an'ilay fifandirana dia tokony “atolotra amin'ny alalan'ny governemantan'i Azerbaijàna na ireo fikambanana ao anatin'ny Firenena Mikambana fa tsy omena mivantana an'i Armenia,” hoy ny tatitry ny The Intercept.
Ny Zoma 21 Janoary, ABC News no nitatitra fa “nanomboka namoaka fampiantsoana hiatrika fitsaràna” ny “grand jury” federaly miandraikitra ny fanadihadiana ao Washington DC , “hikarohana ireo antontan-taratasy momba ireo orinasa amerikàna maro sy ireo fikambanana mpiaro, izay maro amin'ireny no manana fifamatorana amin'i Azerbaijàna, ilay firenena tao anatin'ny Firaisana Sovietika fahiny.”
Ilay fampiantsoana nodinihan'ny ABC News dia mitady, ankoatra ny zavatra hafa, ireo antontan-taratasy mifamatotra amin'ny Oksuz, SOCAR, ny Akademia diplaomatikan'i Azebaidjàna ary ireo fikambanana hafa izay notanisain'ny minisiteran'ny fitsaràna tao anatin'ny raharaha anenjehany an'i Oksuz.
Elin Suleymanov, izay niresaka tamin'ny Caspian Post dia niteny tamim-pihetsehampo momba an'i Cuellar. “Namana be i Cuellar, mpikambana ao amin'ny Kaongresy, namana manokana. Manaja azy fatratra aho. Lehilahy manana fahamendrehana goavana izy,” hoy ny voalaza fa nambaran'i Suleymanov nandritra ny antsafa iray tamin'ny alàlan'ny podcast ho an'ilay mpamoaka vaovao. “Izaho manokana dia feno fankasitrahana an'i Cuellar mpikambana ao amin'ny kaongresy noho ny nandraisany anjara tamin'ny fiarahamiasan'ny Amerikàna sy ny Azerbaijaney, izay tena sarobidy tokoa, sy tamin'ny fampiroboroboana ny tombontsoa amerikàna aty amin'ny faritra misy antsika.”
Tsy zavatra vaovao ny fividianana olona mahay mitaona ataon'i Azerbaijàna any ivelany io, amin'ny alàlan'ny ezaka isankarazany fanaovana adisisika. Manamafy izany ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazety manerana izao tontolo izao, isan'izany ny Organized Crime and Corruption Project (OCCRP).
TOHIZANDRESAKA: Tsy ela akory izay ny FBI dia nanao bemidina tany an-tranon'ny mpikambana iray amperinasa ao amin'ny kaongresy amerikàna, tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana iray momba ireo tombontsoa Azerbaijaney ao amin'ny firenena.
Tany aloha dia efa maro ireo tranga hitan'ny OCCRP nividianan'i Azerbaijàna olona mahay mitaona ny hafa tany ivelany.
Misy ohatra vitsivitsy ao amin'ity tohizandresaka ity 👇https://t.co/LKIymZWrZW
Ao anatin'ny tondro farany indrindra amin'ilay fanaony isantaona momba ny Fahitàna ny Kolikoly, ny Transparency International dia nametraka an'i Azerbaijàna ho eo amin'ny laharana faha-128 amin'ny lisitra iray ahitàna firenena 180. Mandritra izany fotoana izany, tao anaty lahatsary iray nozarainy tao amin'ny kaontiny Twitter, ilay mpikambana ao amin'ny kaongresy, Cuellar, dia nilaza tamin'ny 25 Janoary hoe: “tsy nandray anjara na iray aza tamina hetsika tsy ara-dalàna izy.”
Lalàna 29 Avrily 2022